Isniinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Cyber ​​Isniinta' ee ku saabsan taleefannada casriga ah iyo agabyada kala duwan | Androidsis
Xannibaadda usbuucii darnaa ee soo jirtay Black Friday ayaa sii socota oo maanta ku eg iyadoo loo dabaaldegayo Cyber ​​Monday. Laga bilaabo berrito, dukaamaysiga Kirismaska ​​ayaa bilaabmaya, xilli sanadkii marka qiimuhu kor u kaco si looga faa'iideysto soo jiitanka waqtigaan sanadka ah.
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato maalinta ugu dambeysa ee usbuuca Black Friday, oo ay weheliso Cyber ​​Monday, hoosta waxaan ku tuseynaa dalabyada ugu fiican labada taleefannada casriga ah, kiniiniyada, tirinta furayaasha iyo smartwatches waxaa laga heli karaa maanta Amazon.
1.1 Samsung Galaxy M20 oo ah 189 euro
1.2 Samsung Galaxy M30s oo ah 219 euro
1.3 Samsung Galaxy S8 oo u dhiganta 346,46 euro
2.1 Xiaomi Mi 9T oo ah 294 euro
2.2 Redmi Xusuusin 8 Pro oo ah 240 euro
2.3 Xiaomi Black Shark 2 Pro oo loogu talagalay 649 euro
2.4 Xiaomi Black Shark 329 euro
3.1 OnePlus 6 oo ah 309 euro
3.2 OnePlus 6T oo loogu talagalay 6T ee 349 euro
3.3 OnePlus 7 oo ah 559 euro
4 Huawei / Sharaf
4.1 Huawei P30 Pro oo ah 699 euro
4.2 Huawei P30 Lite oo ah 246,38 euro
5.3 Dab-damiska 8
6 smart soo jeedo
7 kuwa kale
Samsung Galaxy M20 oo ah 189 euro
Samsung waxay na siisaa Galaxy M20, terminal leh shaashad 6,3 inji, oo leh xallinta FullHD, oo leh shaashad u eg ilmo oo ku taal xarunta sare ee shaashadda. Tuur 4 GB iyo 64 GB oo keyd ah. Qalabka oo dhan waxaa maamula processor 8-core ah. Batariga, mid kale oo ka mid ah awoodiisa, wuxuu gaaraa 5.000 Mah, batteri sidoo kale la jaan qaadi kara xawaareynta.
Iibso Samsung Galaxy M20
Samsung Galaxy M30s oo ah 219 euro
Kala duwanaanshaha Samsung ee Galaxy M ayaa noqday kan ugu iibsiga badan Yurub iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaha ugu wanaagsan ee ay bixiyaan lacagta ay bixiyaan dhammaan boosteejooyinka qayb ka ah qaybtaan. Galaxy M30s, wuxuu leeyahay shaashad leh farsamada AMOLED ee 6,4 inji, labo SIM, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah.
Qaybta sawirku waxay ka kooban tahay saddex kamaradood 48, 8 iyo 5 mpx, mid 8 mpx hore ah. Waxay leedahay batari ah 6.000 mAh, in ka badan batari ku filan si aad u isticmaasho terminaal ka badan intensively ku dhowaad laba maalmood iyada oo aan maraya xeedho ah.
Iibso Samsung Galaxy M30s
Samsung Galaxy S8 oo u dhiganta 346,46 euro
Rugcadaaga Samsung Galaxy S8 sidoo kale waxaa laga heli karaa qiimo qaali ah, gaar ahaan 349 euro. Terminalkan wuxuu leeyahay shaashad ah 5,8 inji, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah. Gadaal waxaan ka helaynaa laba kamaradood oo gadaal ah 12 iyo 8 mpx siday u kala horreeyaan iyo xagga hore mid ka mid ah 8 mpx.
Iibso Samsung Galaxy S8
Xiaomi Mi 9T oo ah 294 euro
Xiaomi Mi 9T, wuxuu na siinayaa shaashad AMOLED ah 6,39 injiin iyadoo aan wax qori ah ku oollin xagga horemaaddaama kamaraddu ay saaran tahay aaladda dusheeda ayna ka muuqato furitaanka barnaamijka kamaradda. Qaybta sawirku waxay ka kooban tahay 3 kamaradood oo kala ah 48, 13 iyo 8 mpx siday u kala horreeyaan, waxay leedahay jab NFC ah oo lacag lagu bixiyo, batari 4000 mAh ah, 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah. Haddii shaki ku jiro, taleefannadan casriga ahi waa mid ka mid ah heshiisyada ugu wanaagsan ee maanta la heli karo.
Iibso Xiaomi Mi 9T
Redmi Xusuusin 8 Pro oo ah 240 euro
Redmi Note 8 Pro wuxuu na siinayaa shaashad dhan 6,53-inji, oo leh shaashad yar oo u eg ilmo oo ku taal xagga sare ee shaashadda. Gudaha, waxaan ka helnaa 6GB RAM, 64GB kaydinta gudaha ah intaas oo dhanna waxaa maamula processor-ka Mediaiok ee Helio GT90T. Qaybta dambe, waxaan ka helnaa afar kamarad oo aan ku qabsan karno daqiiqad kasta.
Xiaomi Black Shark 2 Pro oo loogu talagalay 649 euro
Smartphone-ka lagu raaxeysto ciyaaraha moobiilka ee Xiaomi waxaa loo yaqaan Black Shark 2 pro. Qaabkan waxaa maamula 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Processor-ku waa Snapdragon 855 oo lagu daray (jiilka labaad) wuxuuna leeyahay labo kamarad xaga dambe ee 48 iyo 12 mpx siday u kala horreeyaan halka hore uu yahay 20 mpx. Moodelkani waa nooca Isbaanishka waxaana loo heli karaa oo keliya 649 euros.
Soo iibso Xiaomi Black Shark 2 Pro
Xiaomi Black Shark 329 euro
Jiilkii ugu horreeyay ee Xiaomi Black Shark, casriga casriga ee Xiaomi, ayaa sidoo kale hadda lagu heli karaa qiimo xiiso leh oo ku saabsan Amazon. Qalabkani wuxuu leeyahay shaashad 5,99-inji ah, 6GB RAM, 64GB oo keyd ah, dhammaantood waxaa maamula Qualcomm's Snapdragon 845. Qaybta sawirku waxay ka kooban tahay laba kamaradood oo kala ah 20 iyo 12 mpx siday u kala horreeyaan iyo mid hore oo ah 20 mpx. Qiimaheeda caadiga ah waa 329 euros.
OnePlus 6 oo ah 309 euro
The OnePlus 6 wali waa wax ka badan terminal ansax ah inkasta oo uu suuqa ku jiray in kabadan hal sano iyada oo ay ugu wacan tahay shaashadeeda 6,28-inch oo leh xalka FullHD, laba kamaradood oo gadaal ah 16 iyo 20 mpx siday u kala horreeyaan. Processor-ka wada qalabkan oo dhan waa Snapdragon 845 oo ay soosaartay oo uu naqshadeeyay shirkadda Qualcomm waxaana weheliya 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah.
Iibso OnePlus 6
OnePlus 6T oo loogu talagalay 6T ee 349 euro
The OnePlus 6T, tusaalaha xiga ee OnePlus 6, sidoo kale waxaad ka heleysaa Amazon kaliya 419 euro. Terminalkan ayaa ficil ahaan wadaaga muuqaalada la mid ah kii ka horreeyay, oo ay ku jiraan kamaradda, shaashadda iyo processor-ka. Isbeddelka ugu weyn waxaa laga helayaa shaashadda, halka halka OnePlus 6 uu isu beddelayo ilmo OnePlus 6T ah.
Iibso OnePlus 6T
OnePlus 7 oo ah 559 euro
OnePlus 7 waa jiilka xiga ee OnePlus 6T, terminal ay maamusho Qualcomm's Snapdragon 855, oo ay weheliso 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB kaydinta Shaashadda 90 Hz waa 6,41 inji, waxay leedahay dareemayaal shaashadda hoosteeda ah waxayna la jaan qaadi kartaa xawaare degdeg ah, oo aan ku qaadan karno mobilada 100% 30 daqiiqo oo keliya Qiimaha aan ku heli karno Jimcaha Madow wuxuu ahaa 589 euro. Maanta ayaa loo heli karaa 559 euros.
Iibso OnePlus 7
Huawei / Sharaf
Huawei P30 Pro oo ah 699 euro
Huawei P30 Pro wuxuu na siinayaa qayb yar oo u eg ilmada qaabkeeda sare ee shaashadda. Gudaha, waxaan ka helaynaa processor-ka Kirin 980, oo uu weheliyo 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah.
Qeybta sawirada, waxaan ka helnaa 3 kamaradaha xaga dambe ee 40, 20 iyo 8 mpx siday u kala horreeyaan oo na siiya weynayn 5x zoom ah. Qiimaheeda caadiga ah waa 899 euro.
Soo iibso Huawei P30 Pro
Huawei P30 Lite oo ah 246,38 euro
Walaalka yar ee P30 Pro sidoo kale waxaa laga heli karaa iibka Amazon inta lagu jiro Cyber ​​Monday, oo ah taleefan casri ah oo ay ku shaqeysato shirkadda Huawei's Kirin 710 oo leh 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Shaashadu waxay gaareysaa 6,15 inji oo leh jeexdin u eg qaab ilmeyn iyo xallinta Full HD. Waxay sidoo kale na siinaysaa nidaam kamarad saddex-geesood ah xaga dambe: 40, 2 iyo 8 mpx siday u kala horreeyaan.
Soo iibso Huawei P30 Lite
Samsung Galaxy Tab A, kiniin leh shaashad 10,5-inji ah, Qiyaasta HD oo dhammaystiran, processor 8-core ah oo ay la socdaan 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB kaydinta ayaa laga heli karaa Amazon for 229,99 euros. Kiniinkani wuxuu leeyahay boorso lagu kaydiyo si loo ballaariyo booska la heli karo illaa 256 GB. Qaabkan waxaa maamula Android 8.1.
Amazon waxay diyaar noo tahay maanta MediaPad T5, kiniin leh shaashad 10,1-inji ah, oo leh xal HD buuxa. Qalabka oo dhan waxaa maamula processor 8-core ah, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo ay weheliso Android 8 oo leh lakabaynta EMUI 8.0. Batariga wuxuu gaaraa 5.100 Mah, wuxuu leeyahay culeys dhan 460 garaam. Qiimaheeda: 179,99 euros.
Kiniinka 'Amazon Fire 8 HD' waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo suuqa haddii aynaan ugu talagalin in aan lacag badan ku bixino laakiin aan dooneyno tayo iyo dammaanad, waa shay aan Amazon waligiis guuldaraysan. Fire 8 HD waxaa ku shaqeeya processor 4-core ah iyo 1,5GB RAM. Nooca leh 16 GB oo keyd ah ayaa loo heli karaa 69,99 euros, Meel lagu keydiyo oo aan ku balaarin karno kaarka microSD.
Huawei Watch GT Sport leh GPS, qalabka garaaca wadnaha ayaa laga heli karaa Amazon 109 euros.
Samsung Galaxy Watch Active, oo midabbo kala duwan leh kuna dhammaaday 199 euros.
Samsung Galaxy Watch, 46mm, oo leh shaashad 1,3-inch ah, 4GB oo keyd ah, GPS ku dhisan iyo biyo-la’aan ayaa loo heli karaa 232 euros.
Samsung Gear Sport, ku habboon in lagu qiyaaso waxqabadkayaga isboorti ayaa laga heli karaa Amazon 149 euros.
Fitbit Versa, Waxaa lagu heli karaa midabyo kala duwan, waxay na siineysaa ismaamul ilaa 4 maalmood ah, oo leh 4-ta habeen, waxay cabireysaa dhaqdhaqaaqa isboortiga marka lagu daro la socoshada hurdada, talaabooyinka, masaafada la soo maray ... 128,99 euros.
Muuji: 6 ", 720 x 1440 pixels
Processor: MediaTek Helio P22 2GHz
Batariga: 3500 mAh
Muuji: 5.9 ", 720 x 1560 pixels
Processor: Snapdragon 439 1.8GHz
Kaamirada xagasha ballaaran ee fiidiyowyada waxqabadka; ku duub fiidiyowyo xiiso leh xaalad kasta oo iftiin leh; Shaxda ...
Nidaamka kamaradaha Triple; ha moogaan wax mahadnaqa kamaradda diiradda saareysa; sidoo kale wuxuu ku darayaa saameyn fiican ...
21 shaashadda shaneemada (9: 6,3); ku raaxayso waayo-aragnimada shineemooyinka oo ku saabsan hd buuxa + shaashad ballaadhan ...
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda sirdoonka macmalka ah; qaado sawirro wanaagsan iyo fiidiyowyo mahadsanid awoodaha weyn ...
4g casriga ah oo leh tiknoolajiyadda nfc si looga faa'iideysto xawaaraha ugu wanaagsan ee wax lagu baadho iyo lacag-bixin la'aanta xiriirka la '...
Iftiin sare 5 "hd ips shaashad taabasho badan-taabasho leh oo leh 420 nits oo dhalaal ah si loogu wada daawado dhammaan ...
Waxqabadka jilicsan oo ay ugu mahadcelineyso processor-kiisa 1,3ghz quad-core qualcomm snapdragon; 8gb rom xasuusta lagu ballaarin karo ...
8mp kamarad weyn oo leh laydh hogaaminaya iyo xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan sida waqti lumis, qaab xirfadeed, hdr ama miirayaal ...
Waxqabad xoog leh oo lagu kalsoonaan karo mahadnaqa octa-core 1,6ghz cortex a-55 processor iyo meel ballaaran oo lagu kaydiyo ...
Batariga weyn ee 4000mah ee madax-bannaanida cajiibka ah ee 2 maalmood ee isticmaalka mahadsanid, iyo kuwo kale, nooca android 9 ...
Naqshad qurxoon oo leh dhalaal dhalaalaya oo gaar ah oo leh milicsiga UV iyo qaabab nano ah iyo ergonomik xajin fiican
13MP + 2MP AI laba kamarad leh muraayad qoto dheer oo loogu talagalay saameynta bokeh; kamaradda hore waa 5MP
6.39 "Shaashad-shaashad buuxda - Jirka oo siisanaya '' Magnetic sliding body ''
Flagship gadaal kamarad labalaab ah 12 + 12 MP - Kameradda hore ee laba-geesoodka leh AI iyo selfie light 24 + 2 MP
Naqshadeynta dhoobada oo leh geesaha wareegsan
Muuji: 6.4 ", 1080 x 2340 pixels
Processor: MediaTek Helio P90 2.2GHz
Camera: Dual, 48MP + 5MP
Batariga: 4035 mAh
Nokia 7.1 - Taleefannada casriga ah ...
Shaashadda: 5.84 "19: 9 oo leh HD + LCD heer sare ah
Aluminium Aluminium ah iyo Corning Gorilla Glass oo ku yaal xagga hore iyo xagga dambe
12MP 2PD laba kamarad, AF, F1.8, 1.28um, opticalZeiss / 5MP, FF, F2.4, 1.12um
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Isniinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Cyber ​​Isniinta' ee ku saabsan taleefannada casriga ah iyo qalabyada